August 27, 2019 - ThutaStar
အချစ်အတွက် အသက်စွန့် သွားတဲ့ ၁၃ နှစ် အရွယ် စုံတွဲ
August 27, 2019 Thuta Star 0
အချစ်အတွက် အတူတူ ရေထဲ ခုန်ချရာမှ ဖွတ်တွေ့ပြီး ရေနစ်သွားတဲ့ ၁၃ နှစ် အရွယ် စုံတွဲ ငယ်ရွယ်တဲ့ အချိန်မှာ မိုက်ရူးရဲ ဆန်ချင်ကြတာ လူငယ်တိုင်းရဲ့ အကျင့်ပါပဲ ။ ချစ်မိရင်တော့ အပျော်ရော အငိုရော အမျိုးစုံ ကြိုးခုန်ပါပဲ။ ချစ်မိရင် ကမ္ဘာထိပ်ဆုံးထိ ရောက်သွားသလို […]
မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ကြက်တောင်ကစားသမား သက်ထားသူဇာ ရဲ့ အောင်မြင်မှုများ နောက်ကွယ်က စိတ်မကောင်းစရာအခြေအနေ
မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ကြက်တောင်ကစားသမား သက်ထားသူဇာရဲ့ အောင်မြင်မှုများ နောက်ကွယ်က စိတ်မကောင်းစရာအခြေအနေ ကဲ ဆရာတို့ရေ မြန်မာ့ကြက်တောင်မယ်ဟာ ကိုယ်တွေ ထင်ထားသလို နိုင်ငံတော်က ထောက်ပံ့ပြီး ပြိုင်ပွဲတွေကို သွားပြိုင် နည်းပြ နဲ့ မိဘက နောက်ကနေ လိုက်အားပေး၊ ခွန်အားရှိတာတွေစားရင်း နိုင်ငံတကာ ပွဲတွေကို မင်းသမီးတစ်ပါး လို […]
မွေးရပ်ဇာတိမြေမှ ရပ်ဆွေရပ်မျိုးတွေကို သိန်း၅၀၀၀လှူတဲ့ ရှားမှရှားအလှူရှင်
မိုးကုတ်မြို့ ရတနာရှင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဦးအောင်စိုးဦး မိသားစု မှ မိဘများမွေးရပ်မြေ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အရာတော်မြို့နယ် မန်းကျည်းစောက်ရွာကို တစ်ယောက် ၂၀၀၀၀ိ/နုန်း နဲ့ သိန်းပေါင်း ၅၀၀၀ိ/= သိန်းငါးထောင်ကျော် လှုဒါန်းမှု့များပြုလုပ်သွားပါသည်။ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓုခေါ်ပါတယ်….နောက်လဲ ဒီထက်မက လှုဒါန်းနိုင်ပါစေ…. ပြောရရင်တော့ ကျုပ်တို့ရွာနဲ့ နီးနီးလေးပါပဲ အဲ့ရွာက …. […]
မင်္ဂလာဆောင်ပြီး (၅) မိနစ် လောက်တောင် မပျော်လိုက်ရရှာတဲ့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့အဖြစ်….
မင်္ဂလာဆောင်ပြီး (၅) မိနစ် အကြာမှာပဲ အသေဆိုးနဲ့ သေခဲ့ရရှာတဲ့ ဇနီးမောင်နှံ ငယ်ငယ်ကတည်းက အတူကြီးပြင်း အတူတူ ဆော့ကစားခဲ့ကြပြီး၊ ချစ်သူ ဘဝကို ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ စောစီးစွာ တက်လှမ်းခဲ့ ကြတဲ့ မင်္ဂလာ ဇနီးမောင်နှံ ကတော့ ထင်မှတ် မထားတဲ့ အဖြစ်ဆိုးကြောင့် မင်္ဂလာဆောင်ပြီး မိနစ်ပိုင်းလေး […]
မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော် ရင်ပြင်တော်စခန်းရှိ စေတီတစ်ဆူ ပြိုကျပျက်စီး မြေခမှုဖြစ်ပွား…
မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုများကြောင့် ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော် ရင်ပြင်တော်စခန်းရှိ စေတီတစ်ဆူမှာ သြဂုတ်၂၅ ရက် ညနေ ၆ နာရီခန့်က ပြိုကျပျက်စီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ စေတီတော်မှာ ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်ကြီး၏ အောက်ပတ်လမ်းအနီး၊ ချောက်ဘက်ရှိ ကိုးနဝင်းဘုန်းတော်ကြီးအပေါ်ကျောင်း၌ တည်ထားကိုးကွယ်လျက်ရှိသော ဉာဏ်တော် ၂၂ ပေအမြင့်ရှိ စေတီတော်တစ်ဆူဖြစ်ကြောင်း၊ စေတီတော်မှာ ထီးတော်နှင့်အတူ ရုတ်တရက် […]
မ​ကွေးတိုင်း ​ကျောက်​မီး​သွေးတွင်းပြိုကျမှု နောက်ဆက်တွဲသတင်း
မ​ကွေးတိုင်း ​ကျောက်​မီး​သွေးတွင်းပြိုကျမှု နောက်ဆက်တွဲသတင်းအရ ပိတ်မိလူ (၄) ဦး အနက် (၂)ဦး သေဆုံးလျှက်တွေ့ရှိ ကျန်နှစ်ဦး ဆက်လက်ရှာဖွေဆဲ သြဂုတ်​လ ၂၅ရက်​​နေ့က မ​ကွေးတိုင်း​ဒေသကြီး အထက်​မင်းလှမြို့နယ်​ ဆပ်​ပြာ​​ကျေးရွာအနီး အင်​ကြင်း​တောင်​​ ကျောက်​မီး​သွေးကုမ္မဏီမှတူး​ဖော်​​နေသည့်​​ကျောက်​မီး​သွေးတွင်းပြိုကျ၍အမျိုးသား(၄)ဦးပိတ်​မိ​နေခဲ့ပြီး (၂)ဦးကို သြဂုတ်​လ ၂၆ရက်​ ​နေ့လယ်​ပိုင်းကဆယ်​ယူရရှိခဲ့သည်​။ သြဂုတ်​လ ၂၆ရက်​​နေ့​ ​နေ့လယ်​ပိုင်းက […]
Producer တစ်ယောက် ထုတ်ပြော လိုက်တဲ့ Goo Hye Sun တို့ရဲ့ ကင်မရာနောက်ကွယ်က ရန်ပွဲ အကြောင်း
အရမ်းကို ချစ်တဲ့ ဆယ်လီစုံတွဲ ဆိုပြီး လူသိများခဲ့တဲ့ မနဲ့ မောင် ဆယ်လီစုံတွဲ Goo Hye Sun နဲ့ Ahn Jae Hyun တို့ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေ ကတော့ တောက်လျောက် ထွက်ပေါ် နေပါတယ်။အတွင်းမှာ မပျော်တဲ့ အိမ်ေ […]
လေယာဉ်ပျံသန်းနေစဉ် လေယာဉ်အိမ်သာထဲ၌ ခရီးသည်တွေနဲ့ အဝှါဆက်ဆံပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေး ပိုက်ဆံရှာခဲ့တဲ့ လေယာဉ်မယ်. .
တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ ဆုတ်ယုတ်သွားတာတော့ စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဝှါပိုင်းဆိုင်ရာ ဦးစားပေးလာပြီး အပျော်အပါးများလာတဲ့အပေါ်မှာ ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ် အဆင်သင့် မကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေက ခရီးဦးကြိုပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း လေကြောင်းလိုင်းတခုက လေယာဉ်မယ်က ခရီးသည်နဲ့ ပျော်ပါးခွင့်ပေးပြီး ယူရို6သိန်း ခွဲ ကို2နှစ်အတွင်း အပိုဝင်ငွေ ရှာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် လေကြောင်းလိုင်း […]
လူကြားလို့မှ မကောင်းတဲ့ အဖေနဲ့သမီးဇာတ်လမ်း (ပညာပေး)
ကျန်းမားရေး ဆေးမှူးတစ်ယောက်ဟာ တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် သူတစ်ခါမှမကြားဖူးတဲ့ ဖအေနဲ့သမီးကြားက လူကြားလို့တောင်မကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကို ဦးလေးကြီးတစ်ယောက်က သူ့ဆီဖုန်းဆက်ပြီး အကြံဥာဏ်တောင်းလာတဲ့ အကြောင်းကို သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်ဖေ့စ်ဘွခ်ပေါ်မှာ အမှန်အတိုင်း ပြန်လည်ရေသားဖော်ပြခဲ့ရာမျှဝေသူတွေ၊ ဝေဖန်သူတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ မလေးရှားနိုင်ငံက ဖေ့စ်ဘွခ်သုံးစွဲသူ Syed Azmi ရေးထားတာကတော့ သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့က သူ့ဆီကိုဦးလေးကြီးတစ်ယောက် ဖုန်းခေါ်လာပါတယ်။ […]
ရတနာသုံးပါးကို မစော်ကားကြပါနဲ့ ဘုရားတရားအလုပ်ကို ပိုလုပ်ကြပါ
မကြားဘူးတာတွေ မြင်ရတော့မယ် သြော် – – – မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေ အင်အားများတဲ့အခါတိုင်းကပ်သုံးပါးဆိုက်တဲ့အကြောင်းတွေ စာပေတွေအမြောက်အများ ဖတ်ရှု့ဘူးခဲ့ပါတယ်။ အစာရေစာ ရှားပါးတဲ့ကပ် မီးလောင် ရေကြီး စတဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရယ် နဲ့ လက်နတ်တွေနဲ့ မညှာမတာ သတ်ကြဖြစ်ကြတဲ့ကပ် ရောဂါအမျိုးမျိုး ကျရောက်ပြီ လူတွေသေတဲ့ကပ် အဲဒီကပ်သုံးပါးဆိုက်ပြီဆိုရင် စစ်ဖြစ်လို […]